जसपाको माग पूरा गर्ने सरकारको तयारी, बिहीबारसम्म २ सय ४२ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने ! « रिपोर्टर्स नेपाल
जसपाको माग पूरा गर्ने सरकारको तयारी, बिहीबारसम्म २ सय ४२ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने !
प्रकाशित मिति : 2021 April 11, 3:30 pm
काठमाडौं, २९ चैत्र । सरकारले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अघि सारेका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सरकार र जसपाका नेताहरु सम्मलित वार्ता टोलीले यस विषयमा काम गरिरहेको थियो । जसपाले जेलमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाका यी दुई माग पूरा गराउनेगरि गृहकार्य थालिसकेको स्रोतको दाबी छ । जसपानिकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार विभिन्न २४ वटा केशा २ सय ४२ जनाको मुद्दा फिर्ताको लागि तयारी भैरहेको छ । जसपाले आफ्नो सांसद रेशम चौधरीको पनि रिहाईको माग गरेको छ । तर, सरकारले चौधरीलाई आममाफी नदिने अडान लिएको छ । पछिल्लो समय जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीबीच निरन्तर सम्वाद भैरहेको छ । अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर छलफलमा बसेको विषयले जसपाभित्र नै तरंग पैदा भएको छ । कतिपयले अध्यक्ष ठाकुरले सत्ता सहकार्यको लागि भित्री साँठगाँठ गरेको पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
जसपामा यतिवेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुई धार छ । सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अध्यक्ष ठाकुर र शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो उभिएका छन् भने तत्काल ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुनेमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने प्रयास भैरहँदा जसपामा एकमत नदेखिँदा नयाँ सरकारको लागि ठोस सहमति हुन सकेको छै्रन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै बोलाएको तीन दलको बैठकमा समेत जसपाले समय मागेको थियो । File Photo/ReportersNepal
ललितपुरमा किशोरी बलात्कार गरेको अभियोगमा युवक पक्राउ
काठमाडौं, २६ जेठ । ललितपुरमा एक किशोरी बलात्कृत भएकी छिन् । १५ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र खारेज गर्न माग
काठमाडौं, २६ जेठ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको दुई महिना पूरा हुन लाग्दासमेत विद्यार्थीले
काठमाडौं, २६ जेठ । प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण बहादुर राईले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख
पब्जी बन्द गर्न संसद्मा आवाज उठ्यो
काठमाडौं, २६ जेठ । संसदमा अनलाइन गेम पब्जी बन्द गर्न आवाज उठेको छ । पछिल्ला
बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न गएनन् आज गाडी
काठमाडौं, २६ जेठ । काठमाडौंबाट फोहोर फाल्न आज गाडी जान सकेका छैनन् । सुरक्षाको ग्यारेन्टी
मेलम्चीमा फट्के पुलमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि सडक अवरुद्ध
काठमाडौं, २६ जेठ । निरन्तर वर्षापछि आएको बाढीले मेलम्चीको नदीको पुलमा क्षति पुर्याएको छ । गएरातिको
मध्यमवर्ग बाँच्नै नसक्ने अवस्था छ, योभन्दा राम्रो शासन त बरु बिहारमा लालु यादवले चलाएका थिएः ज्योति बानियाँ
काठमाडौं, २६ जेठ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले महँगी बढ्नुमा राजनीतिक कारण जिम्मेवार भएको आरोप